2 Kronike 25 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
2 Kronike 25:1-28
25 UAmatsiya+ waba ngukumkani eneminyaka engamashumi amabini anesihlanu ubudala, yaye walawula iminyaka engamashumi amabini anesithoba eYerusalem. Igama likanina lalinguYehowadan+ waseYerusalem. 2 Wenza okulungileyo emehlweni kaYehova,+ kuphela akakwenzanga ngentliziyo epheleleyo.+ 3 Kwathi kamsinya nje bakuba ubukumkani buqinile kuye, ngokukhawuleza wabulala+ abakhonzi bakhe+ abaxabela ukumkani uyise.+ 4 Oonyana babo akazange ababulale, kodwa wenza ngokuvisisana noko kwakubhalwe emthethweni, encwadini kaMoses,+ oko uYehova wakuyalelayo esithi: “Ooyise abafanele bafe ngenxa yoonyana,+ noonyana abafanele bafe ngenxa yooyise;+ kodwa ngamnye ufanele afe ngenxa yesono sakhe.”+ 5 UAmatsiya wamqokelela ndawonye uYuda ukuba eme ngokwezindlu zookhokho bakhe,+ ngokweentloko zamawaka+ nangokweentloko zamakhulu+ kuye wonke uYuda noBhenjamin; yaye waqhubeka ebabhalisa ukususela kwabaneminyaka engamashumi amabini+ ubudala ukuya phezulu, waza ekugqibeleni wabafumanisa bengamakhulu amathathu amawaka amadoda abalaseleyo aphuma umkhosi, naphatha incula+ nekhakha elikhulu.+ 6 Ngaphezu koko, waqesha kwaSirayeli amadoda angamakroti, anamandla alikhulu lamawaka ngekhulu leetalente zesilivere. 7 Kwafika umntu othile kaTHIXO oyinyaniso+ kuye, esithi: “Owu kumkani, mawungahambi nawe umkhosi kaSirayeli, kuba uYehova akakho kuSirayeli,+ oko kukuthi, oonyana bakaEfrayim. 8 Kodwa yiza wena ngokwakho, wenze, yiba nesibindi emfazweni.+ UTHIXO oyinyaniso angakwenza ukhubeke phambi kotshaba; kuba kuThixo kukho amandla okunceda+ nawokukhubekisa.”+ 9 Waza wathi uAmatsiya+ kumntu kaTHIXO oyinyaniso: “Kodwa kuza kwenziwa ntoni ngekhulu leetalente endizinike abaphumi-mkhosi bakwaSirayeli?”+ Waza umntu kaTHIXO oyinyaniso wathi: “KuYehova kukho indlela yokukunika okuninzi ngakumbi kunoku.”+ 10 Ngako oko uAmatsiya wabahlula, oko kukuthi abaphumi-mkhosi ababeze kuye bevela kwaEfrayim, ukuba baye endaweni yabo. Noko ke, bavutha ngumsindo nxamnye noYuda, kangangokuba babuyela endaweni yabo bevutha ngumsindo.+ 11 Ke yena uAmatsiya, waba nesibindi wakhokela abantu bakhe waya kwiNtlambo yeTyuwa;+ waza wabulala koonyana bakaSehire,+ abalishumi lamawaka.+ 12 Yaye kwabakho ishumi lamawaka koonyana bakaYuda ababathimba bephila. Ngoko babazisa phezu kwengxondorha, babaphosa phezu kwengxondorha; baza bona, bonke badlabhuka baphela.+ 13 Ke wona amalungu abaphumi-mkhosi awawabuyisela umva uAmatsiya ukuba angayi naye emfazweni,+ ahlasela izixeko zakwaYuda, ukususela eSamariya+ ukuya kufikelela eBhete-horon,+ aza axabela amawaka amathathu kuzo aziphanga kakhulu. 14 Kwathi emva kokubuya kuka-Amatsiya ekuwaxabeleni amaEdom wazisa oothixo+ boonyana bakaSehire yaye wazimisela bona njengoothixo,+ yaye waqubuda kubo,+ waza waqhumisela kubo umbingelelo.+ 15 Ngako oko umsindo kaYehova wavutha nxamnye noAmatsiya, waza wathumela umprofeti kuye wathi kuye: “Kutheni uye wafuna+ oothixo babantu+ abangazange babasindise abantu babo esandleni sakho?”+ 16 Kwathi esathetha naye ukumkani ngokukhawuleza wathi kuye: “Ngaba sakwenza umcebisi kakumkani?+ Yeka ukuze kube kuhle kuwe.+ Kutheni befanele bakuxabele?” Umprofeti wamyeka, kodwa wathi: “Ngokuqinisekileyo ndiyazi ukuba uThixo ugqibe ukuba akonakalise,+ ngenxa yokuba wenze oku+ ungaliphulaphulanga icebiso lam.”+ 17 Wandula uAmatsiya ukumkani wakwaYuda wathabatha icebo wathumela kuYehowashe unyana kaYehowahazi unyana kaYehu ukumkani wakwaSirayeli,+ esithi: “Yiza! Masikhangelane ebusweni.”+ 18 UYehowashe ukumkani wakwaSirayeli wathumela kuAmatsiya ukumkani wakwaYuda, esithi:+ “Ukhula olunameva olwaluseLebhanon lwathumela kumsedare owawuseLebhanon,+ lusithi, ‘Intombi yakho yinike unyana wam njengomfazi.’+ Noko ke, kwadlula irhamncwa lasendle+ elaliseLebhanon laza lalunyathela ukhula olunameva. 19 Uzixelele ukuthi, Yabona uxabele uEdom.+ Intliziyo yakho+ ikuphakamisile ukuba uzukiswe.+ Ke kaloku hlala endlwini yakho.+ Kutheni ufanele ubambane kule meko imbi+ uze uwe, wena noYuda?”+ 20 Kodwa uAmatsiya akazange aphulaphule; kuba kwakuvela kuTHIXO oyinyaniso+ ngenjongo yokumnikela esandleni sakhe, ngenxa yokuba baye bafuna oothixo bakwaEdom.+ 21 Ngoko uYehowashe ukumkani wakwaSirayeli wenyuka,+ baza bakhangelana ebusweni,+ yena noAmatsiya ukumkani wakwaYuda, eBhete-shemeshe+ yakwaYuda. 22 Waza uYuda woyiswa phambi kukaSirayeli,+ kangangokuba wasaba, ngamnye waya ententeni yakhe.+ 23 UAmatsiya ukumkani wakwaYuda, unyana kaYehowashe unyana kaYehowahazi, wabanjwa+ nguYehowashe ukumkani wakwaSirayeli eBhete-shemeshe, emva koko wamzisa eYerusalem+ waza waluqhekeza udonga lweYerusalem, ukususela kwiSango lakwaEfrayim+ ukuya kufikelela kwiSango leMbombo,+ amakhulu amane eekubhite. 24 Wathabatha yonke igolide nesilivere nayo yonke impahla eyayifumaneka endlwini kaTHIXO oyinyaniso kuObhedi-edom+ nobuncwane bendlu kakumkani+ nabathinjwa, wandula wabuyela eSamariya.+ 25 Yaye uAmatsiya+ unyana kaYehowashe ukumkani wakwaYuda waqhubeka ephila emva kokufa kukaYehowashe+ unyana kaYehowahazi ukumkani wakwaSirayeli iminyaka elishumi elinesihlanu.+ 26 Ke eminye imicimbi ka-Amatsiya, eyokuqala neyokugqibela,+ khangela! ayibhalwanga na eNcwadini+ yooKumkani bakwaYuda nabakwaSirayeli?+ 27 Yaye ukususela ngexesha lokuphambuka kuka-Amatsiya ekulandeleni uYehova, benza iyelenqe+ nxamnye naye eYerusalem. Ekugqibeleni wasabela eLakishe;+ kodwa bathumela ukuba alandelwe eLakishe bambulalela khona.+ 28 Ngoko bamthwala ngamahashe+ baza bamngcwaba nookhokho bakhe kwisixeko sikaYuda.+
2 Kronike 25